သူငယ်ချင်းကိုပြောချင်သော စကားလေးများ (၂) – The Only Way To Go!
သူငယ်ချင်းကိုပြောချင်သော စကားလေးများ (၂)
Posted on October 3, 2010 February 4, 2011 by barnay
သူငယ်ချင်း ဘဝဆိုတာ ဟန်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော် . ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း တကယ့်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ယူဆရင် ဟန်မဆောင်ပါနဲ့နော်
သူငယ်ချင်း …..လူတိုင်းလိုလို သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းချင်ကြတယ်သူငယ်ချင်း ဘယ်အချိန် ဘယ်အခါ ဘယ်၍ ဘယ်မျှမှာပေါ့ သတ်မှတ်ချင်ကြတယ် . ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းရယ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာ စိတ်ထဲမှာသာ သိရှိ ခံစားရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ငါတော့ယူဆမိတယ်ဟာ ဒီတော့ လက်ရှိမှာ ဘာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို စိတ်မှာ ဖြစ်နေအောင် နေတတ်ဖို့လိုတယ်နော် သူငယ်ချင်း… ဘာလို့လဲဆို ဒီအကြောင်းကို ဘဝနေဝင်ချိန်မှ သေချာ နားလည်လိမ့်မယ် သူငယ်ချင်း
ဒို့တတွေ အသက်ရှည်မယ်လို့ အာမခံချက် မရှိဘူးနော် .လုပ်ချင်တာတွေ ခုလုပ်လိုက်ပါ ကောင်းချင်တယ်ဆိုလည်း ခုကောင်းလိုက်ပါ .. နော် အရင်တခါက ငါပြောဖူးတယ် ဘဝဆိုတာ နှစ်ခါလာတဲ့ အရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေ …
အခုလို ပြောနေတာတွေက ငါ့ဆန္ဒတွေပါ လူဆိုတာလည်း အခက်သားလားနော် စိတ်တွေကလည်း အပြောင်းအလဲ များတယ်လေ ခုကောင်းနေပြီး တော်တော်ကြာ ကောင်းချင်မှ ကောင်းကြတာ .ဒါပေသိ သူငယ်ချင်း ကောင်းတာလုပ်တဲ့ သူကို ဘယ်သူမှ ဆဲဆိုမလွှတ်ပါဘူးကွာနော်.
ပြောအုံးမယ် သူငယ်ချင်းရယ် … “အသက်ရှင်နေတဲ့ လူမှန်သမျှမှာ နှလုံးသားဆိုတာ ရှိတယ် .အဲ့ဒီရှိတဲ့ နှလုံးသားရဲ့ သဘောက ခံစားတတ်တယ် သူငယ်ချင်း … အချစ်တွေ အမုန်းတွေ မေတ္တာတွေ သံယောဇဉ်တွေ စတဲ့ စတဲ့ ခံစားလို့ရသမျှကို သူတို့ လက်ခံတယ် တွေ့ထိတယ်. အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်က ထိန်းပေးဖို့လိုတယ် သူငယ်ချင်း . သူ့အတိုင်းအတာနဲ့ သူပေါ့ ကွာ
ဖြစ်လာသမျှ ခံစားမှုတွေထဲက ဘာနဲ့ တွေ့တွေ့ မရူးသွပ်စေနဲ့ သူငယ်ချင်း … ရုးသွပ်တာကိုဘယ်သူမှ အရေးစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်.. (အရေးမစိုက်လဲ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုပြီးလည်း ခေါင်းမာမနေနဲ့အုံး) ရူးသွပ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေချင်ရင် တော့ လမ်းပေါ်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားနေတဲ့ အရုးတစ်ယောက်ကို ပြေမြင်ကြည့်လိုက်နော် သူငယ်ချင်း… မင်းနားလည်သွားမှာပါ…
အဲ့ဒီလိုပြောလို့ ခံစားချက်တွေ မရှိရတော့မှာလားလို့လည်း မတွေးလိုက်နဲ့အုံးနော် ဘာလို့လဲဆို .. လူနဲ့ ခံစားချက် ကင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်ဖော်မှု ဝေါဟာရတွေလည်း မွေးဖွားလာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်း..
ကဲ သူငယ်ချင်းရေ ငါပြောချင်တာတွေလည်း ပြောထားတယ်နော် မင်းပြောချင်တာတွေလည်း ပြောပေါ့ ဒို့တတွေရဲ့ခြားမှာ နားလည်မှု အလွှာလေး ရှိတယ်ဆိုတာ သိပေးဖို့ ပြောချင်တယ်နော် …
ခုတော့ နားအုံးမယ် သူငယ်ချင်း နောက်မှ ဆက်ပြောပါအုံးမယ်….
သူငယ်ချင်းကို ပြောချင်သော စကားလေးများ (1)
6 thoughts on “သူငယ်ချင်းကိုပြောချင်သော စကားလေးများ (၂)”
အင်မတန်ကောင်းမွန်ပါတယ် ကိုဘာနေ .. လာရောက်ဖတ်ရှုသွားပါတယ် .. နောက်လည်း မှတ်သားစရာလေးတွေ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ် ..
ဟုတ်ကဲ့ဗျာ လာရောက်ဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ရေးပါအုံးမယ.်ဗျာ ..
Good article for me.Useful ideas !Thanksalot Barnay.
Thanks , Dear fri.
ဟုတ်ပါပြီ .. နားပြီးပြီ နောက်မှ ဆက်ရေးပါမယ် .. 😀